अक्षराको बालमैत्री अत्याधुनिक भवन – Media Bhav
अक्षराको बालमैत्री अत्याधुनिक भवन
March 17, 2018 mediabhav समाचार 0
कठमाडौं– तीन वर्ष पहिला भइचालोले विद्यालयमा क्षति पुगेपछि भवन कस्तो बनाउने भनेर थ’प्रै चर्चा परिचर्चा भए । कोहीले भुकम्प प्रतिरोधी बनाए । कोहीले भुइचालोको त्रास घट्दै गएपछि भवनको चर्चा पनि सेलाउदै गयो । राजधानीको काडाघारी स्थित अक्षरा स्कुलले भने भुकम्प र बालमैत्रि भवन बनाएको छ । भवनको शिक्षाविद् काठमाडौं विश्वविद्यालयका पर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्माले शनिवार उद्घाटन गरे ।
श्र्माले हामीले मुलुुक बाहिरको ज्ञान दिएकोले आफैंलाई चिनाउने शिक्षा दिनु पर्नेमा जोड दिए । ‘अब मुलुक बनाउने ज्ञान दिनु प¥यो । सिप दिनु प¥यो,’ शर्माले भने, ‘काम गर्ने अठोट ज्ञानले दिन्छ । हामीले ज्ञान दिएका छौं । हामीले दिएको शिक्षा राम्रो पनि छैन । नराम्रो पनि छैन ।’
श्र्माले हामीले दिएको शिक्षा आपूूmलाई मात्रै सोच्ने खालको भएको बताए । ‘अब शिक्षा समाजलाई पनि सोच्ने हुनु पर्छ,’ उनले भने, ‘उच्च शिक्षामा राम्रो भनेका विद्यार्थी बाहिर गएका छन् । राम्रो मान्छे बाहिर गएपछि देश कसले बनाउने ? नराम्रो मान्छेले ? हामी प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न छौं । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सके देश छिटै उभो लाग्छ । शिक्षाले प्राकृति स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तरिका सिकाउनु पर्छ । हामीले प्रकृतिमा मात्रै गर्व गरेर ह’दैन । हामीले गरेका काममा गर्व गर्नु पर्छ । हामीले गर्व गर्न लायक काम गर्नुु पर्छ । सगरमाथा प्रकृतिले दिएको हो, त्यसमा गर्व गरेर हुदैन । हामीले निर्माण गरेका भौतिक विकासमा गर्व गर्नु पर्छ । यसो गर्न शिक्षाले सिकाउछ ।’
सरकारले मात्रै होइन नागरिकले पनि केहीगर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण काठमाडौं विश्वविद्यालयमा देखाइएको उनले बताए । ‘जनतासंग पनि केह ीगर्न तागत हुन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले मात्रै गर्न सक्छ र राज्यले मात्रै गर्न पर्छ भन्ने होइन । जनताको संस्थाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने मान्यताले काठमाडौं विश्वविद्यालय खोल्यौं । अक्षरा स्कुल पनि जनताको संस्थाले केह ीगर्न सक्छन् भन्ने उहादरण हो । यहा भएको स्रोतलाइृ सदुपयोग गरेर यो स्कुलले दिएको शिक्षा उदाहरणीय छ ।’
कागेश्वरी मनोहरा नगरापलिकाका मेयर कृष्णहरी थापा ले आफ्नो नगर क्षेत्रका सरकारी विद्यालयलाई नीजी स्क ुलको हाराहारीमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नगरापालिकाको काडाघारीस्थीत अक्षरा स्कुलको सातौ स्थापना दिवस तथा भकम्प प्रतिरोधी भवनको उद्घाटन गर्ने क्रममा मेयर थापाले भने, ‘नीजी क्षेत्र र सरकारीलाई एउटै बाटोमा हिडाउने गरी हामीले भिजन तयार गरेका छौं ।’
द्येश संघीयतामा गएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यलयले हेर्दै आएको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई गएको छ । ‘हाम्रो नगरपालिकाकामा ४० वटा नीजी स्कुल रहेछन्, मेयर थापाले भने, ‘के कस्तो अवस्था छ भनेर अध्ययन गरिराखेका छौं । हाम्रो नगरमा अक्षरा स्कुलले दिएको गणस्तरको शिक्षा प्रसंसनीय छ । यो स्कुलले दिएको गुणस्तरीय शिक्षाको कारण कागेश्वरी मुनोहरा मात्रै नभइ छिमेकी मध्ययपर ठिमी नगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतबाट विद्यार्थी आउने गरेको हन् । यो विद्यालय पनि हाम्रो नगरापालिकामा दर्ताको प्रकृयामा छ ।’ नगरपालिका भित्रका स्कुलका शुुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार समेत स्थानीय सरकरालाई छ ।
स्क्’लकी प्रिन्सिपल अञ्जु भट्टराइले सरक्षित र बालमैत्री सिकाइमा स्कुलले ध्यान दिएको बताइन् । ‘धेरै दुख गरेर यो भवन बनाएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘कठिनाइ र चुनौती छन् । त्यसका बाब्जुद पनि बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर हामी अघि बढेका छौं । आउट डोर र इनडोर कार्यक्रम समायोजन गरेर शिक्षा दिइरुहेका छौ्र । गरी, हेरि भन्ने भनाइका साथ हामी अघि बढेका छौं । मिसन भिजनका साथ लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । हामी देशकै नमुना स्कुल बनाउन लागि रहेका छौं । बौद्धिक डोमेन मात्रै नबनाइ शारिरीक, सामाजिक डोमेन पनि बनाउन चाहन्छौं हाम्रा बालबालिकालाई ।’
गोल्डेन पिकमा गोल्डेन जाम्बोरी
सहकारी समस्या समाधान गर्छुु – मन्त्री लामा